2010/2012/2015 Election » ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းများ – (ပို့စ်ခွဲမတင်ပါနဲ့ – ဒီမှာတင်ပါ)	213
View all posts by အိမ်လွမ်းသူ →	Blog
seaman says: Yangon Press International
အံစာတုံး says: ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မဲရုံ(၁၄၂)ရုံရှိရာ (၈၂) ရုံမှ မဲများရေတွက်ပြီးချိန်၌ NLD က မဲရုံ (၆၅)တွင် အနိုင်ရထားပြီး USDP က မဲရုံ(၇)၌သာ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့မှသာ မဲရေတွက်မှုပြီးဆုံးနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး လောလောဆယ် တွင် NLD က မဲအရေအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျော် အသာစီးရထားသည်ဟု သိရသည်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 87
seaman says: Yangon Media Group
seaman says: 7Day News Journal
seaman says: 1 April 2012 8:18 PM
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒအမှတ်(၂) ရေကြည်- ၂ မဲဆန္ဒနယ်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ လှမြတ်သွေးက အနိုင်ရရှိနေကြောင်း ကနဦးရရှိသော သတင်းများအရ သိရှိရပါသည်။ 1 April 2012 8:10 PM
ကျွန်းစုမြို့နယ်တွင် မဲရုံ(၁၄၂)ရုံရှိရာ (၈၂) ရုံမှ မဲများရေတွက်ပြီးချိန်၌ NLD က မဲရုံ (၇၅)ရုံတွင် အနိုင်ရထားပြီး USDP က မဲရုံ(၇)၌သာ အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် ဧပြီလ(၂)ရက်နေ့မှသာ မဲရေတွက်မှုပြီးဆုံးနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး လောလောဆယ် တွင် NLD က မဲအရေအတွက် ၁၀၀၀၀ ကျော် အသာစီးရထားသည်ဟု သိရသည်။ 1 April 2012 8:04 PM
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4115
Foreign Resident says: ကဲ အဘ တော့ ပင်ပန်းသွားပြီ တော်ပြီ ။
htoosan says: အရီးလတ်ရေ စစ်တပ်နဲ့ နေပြည်တော် နေရာတွေလည်း နိုင်တယ်တဲ့ ..
အံစာတုံး says: ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 276
အိမ်လွမ်းသူ says: ဟုတ်တယ်ကို ထူးဆန်း ရေကျန်တဲ့ နေရာတွေ နိင်တာမထူးဆန်း ပေမဲ့ တပ်နယ်မြေ တွေမှာပါ အပြတ်အသတ် နိင်တာကိုတော့ အံဩမိ သလို အရမ်းလဲ အားတက်မိတယ်။ အနာဂတ် နိင်ငံတော် တည်ဆောက်မှူ့ မှာ တပ်မတော်က အဲဒိ လိုပါဝင် လာတာကိုအရမ်း အံဩဝမ်းသာမိတယ်။
အိမ်လွမ်းသူ says: အဘဖော ပြောသလိုပဲ အခုဟာက ဒေါ်စုရဲ့ NLD နဲ ကြံ့ခိုင်ရေး ပြိုင်နေတာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လက်တဆုပ်စာ အခွင်ထူးခံ လူတန်းတွေ ကိုတော်လှန် နေတာပါ။
Khin Latt says: နေပြည်တော်မှာလည်း NLD ပါတီက ၄ နေရာလုံးအနိုင်ရရှိသွားကြောင်း သတင်းကြားနေရပါတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 25
Yoko Ono Bono says: စစ်တပ်မဲဆန္ဒနယ်တွေအားလုံးတော့ရှုံးတယ်ပြောတယ် အာအက်(ဖ်)အေ ကအမရဲ့ ..သူတို့ လဲ ဘယ် risk ယူမလဲနော် နားလည်ပေးလိုက်ပါ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8
nganyi11 says: အမခင်လတ်
ရွာစားကျော် says: ကြောက်လို့သာ နမ်းရ နှုတ်ခမ်းက တာတေလန် ဂျီးစော်ကနံ ဖြစ်တဲ့ နေရာလောက် နိုင်မှာပေါ့ဗျာ
shwe kyi says: မခင်လတ် ရယ်လေးစားရပါတယ်။ အစ်မရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုအားကျမိပါတယ်။
seaman says: The Voice Weekly
seaman says: Mizzima – News in Burmese
Khin Latt says: Oppps….
Foreign Resident says: ငဒို့ တိုင်းပြည်ကြီး ပြောင်းလဲ တိုးတက်တော့မှာ သေချာသွားပါပြီကွယ် ။
yuiio says: ကလောမြို့နယ်မှာ NLD မဲအပြတ်အသတ်သာတယ် …….. ပအို့ဝ်ရွာတွေကလွဲလို့ ။ ပအိုဝ်ရွာတွေမှာက PNO ကများတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ပေါ်တွေမှာ အပြတ်အသတ်ပဲ …….. နိုင်တယ် ……….. ။
Khaing Khaing says: သမီးလည်း မနေ့ကတည်းက ရင်ခုန်နေသူတွေကိုပြောထားပါတယ် NLD ပြိုင်မယ့် နေရာတိုင်းမှာနိုင်ပါမယ် ဆိုတာကိုလေ ….. အဘ FR ပြောသလိုပါပဲ အမေစုကို လွှတ်တော်ထဲခေါ်ချင်လို့ ဟန်ရေးပြလိုက်တာပါ … ဒါဒို့ရဲ့ပြည် ဒါဒို့ရဲ့မြေပါပဲ ……
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1161
မှော်ဆရာ says: မြန်အောင်သား မှော်ဆရာ CJ တာဝန် ထမ်းဆောင်လိုက်ပါတယ် နော… ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဟင်္သာတခရိုင် ၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ဧပြီ 1 ရက်နေ့၌ ကျင်းပလျှက်ရှိသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေများကို စုံစမ်းရရှိသမျှ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
htoosan says: ပြည်သူတွေ ဒီလိုပြနိုင်ခဲ့တာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပါဘဲ။
ကိုရင်မောင် says: ဒါကပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲစစ်မှန်တဲ့ဆန္ဒမဲတချို့တ၀က်ဘဲရှိသေးတာနော်…..
shwe kyi says: ဟုတ်တယ် ရွှေကြည်တို့ဒီတစ်ခေါက်မဲမပေးရလို့။ ပေးရလို့ကတော့ လာထား ခွပ်ဒေါင်းပဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 539
myanmarcitizen says: ကြားရတာ သိပ်ပျော်လိုက်တာဗျာ။ အောင်မြင်ကြပါစေ
ချာလီဂဇက်ဒလဝမ် says: ညတိုင်း ညတိုင်းတွေးနေမိတယ် ၊ အခုလို အပြောင်းအလဲမျိုးပေါ့လေ ၊
Thanlwinoo says: မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ Media များရဲ့ Latest News များကို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 148
Lwin Aung says: Good luck NLD. I returned from NLD office about 8 p.m. I saw NLD almost win. There were about 20000 peoples in front of that office with great happy . If my country get real democracy, Myanmar will become liked Singapore.
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 167
timothy says: The people had spoken.
Foreign Resident says: ယှဉ်ပြိုင်ရာ ၄၄ နေရာလုံး NLD နိုင်ပြီ
Foreign Resident says: နှစ်ထပ် ရှိ မှ မှတ်မိ မှာ လား သုံး ထပ် ရှိ သွား အောင် ၂၀၁၅ မှာလဲ လာမယ်
ကိုရင်မောင် says: ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ
Thel Nu Aye says: ၀ါးခယ်မ ဧရာဝတီတိုင်း
Thel Nu Aye says:်ရေကြည် ဧရာဝတီတိုင်း
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 654
maungmoenyo says: Dear All
kyeemite says: သတင်းကတော့ တော်တော်ပြည့်စုံနေပါပြီ…
ရွာစားကျော် says: Eleven Media Group
cherry phyu says: ပယ်မဲတွေ ဘာကြောင့်ဒီလောက်များရတာလဲ။
Phaung Phaung says: မနေ့က NLD ကားတစီး အလံတလွင့်လွင့်နဲ့ ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြန်လာလဲမသိဘူးတွေ့လိုက်ရတယ်…ဒါနဲ့ ကားဘေးကဖြတ်သွားတော့ နိုင်လားဆိုတဲ့အဓိပါယ်နဲ့ လက်မထောင်ပြပီးမေးလိုက်တယ်……. ကားပေါ်ကလူ
amatmin says: ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ နေရာ ၄၅ နေရာအနက် ၄၃ နေရာကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရ